ओभन पकाइएको चिकन स्तनहरू 30 Min० मिनेटमा तयार! - व्यंजनहरु
कसरी क्रोक भाँडो मा भाँडा मा मक पकाउने
कसरी पूर्व भरिएको चिकन स्तन पकाउन
Marinara सॉस र spaghetti चटनी बीचको भिन्नता
ओभन पकाइएको चिकन स्तनहरू
पकाएको चिकन स्तनहरू बनाउन को लागी अधिक साधारण वा स्वादिष्ट हुन सक्दैन! चिकन स्तनहरू एक सरल जडिबुटीको मिश्रणमा फ्याँकिन्छ त्यसपछि ओभन बेक्ड हुन्छन् जबसम्म तिनीहरू कोमल र रसदार हुँदैनन्!
यो सजिलो पकाइएको चिकन नुस्खाले कुखुराको स्तनहरू बनाउँदछ जुन हल्का मौसम र ठूलो हुन्छ चिकन सलाद , वा मा हलचल गर्न कुखुराको क्यासरोलहरू । जबकि यी पकाएको कुखुराको स्तन चाहिएको कुनै पनि नुस्खामा प्रयोग गर्न उत्कृष्ट छन्, तिनीहरू यति रसदार र स्वादिष्ट हुन्छन्, तिनीहरू आफैंमा उत्तम सेवा पनि दिन्छन्।
रसदार पकाएको चिकन
यो ती रेसिपीहरू मध्ये एक हो जुन तपाई आफैंलाई बारम्बार प्रयोग गर्नुहुनेछ। यसले एक सबै उद्देश्यको कुखुराको स्तन उत्पादन गर्दछ जुन व्यंजनहरूमा थप्न सकिन्छ वा खाना प्रिपको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ। पक्कै पनि, हामी पनि प्यानको दायाँ जस्तो सेवा गर्न मन पराउँछौं बेक्ड Zucchini र सलाद।
पकाएको कुखुराको स्तनहरू प्राकृतिकरुप दुब्ला, प्रोटीनले भरिएको, र बनाउन सजिलो हुन्छ। तिनीहरू जडिबुटी र तेल थप्ने जत्तिकै सरल छन्, र ओभनमा फ्याँक्न!
को वास्तवमा रसदार कुखुराको रहस्य उच्च तापमान हो रसमा छाप लगाउन र निश्चित रूपमा तपाईले यसलाई ओक गर्नुहुन्न भन्ने कुरा निश्चित गर्न।
कहिलेसम्म चिकन स्तन बनाउने
उत्तम पकाएको कुखुराको स्तनको कुञ्जी तापमान र समय हो। कुखुराको स्तनहरू प्राकृतिकरुप दुब्ला हुन्छन्, त्यसैले यदि तपाईंले तिनीहरूलाई थाम्नुभयो भने, तिनीहरू सुख्खा बाहिर आउनेछन्।
हड्डी रहित छालाविहीन कुखुराको स्तन ए मा पकाउँदै उच्च तापमान यसले राम्रो रस बनाउँदछ किनकि यसले जुस लगाउँदछ जब यसले खाना बनाउँदछ (म chicken०० डिग्री एफ मा कुखुरा पकाउछु)। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक प्रयोग गर्नुहुन्छ द्रुत मासु थर्मामीटर पढ्न तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा पकाउनको लागि।
400 ° F मा कुखुरा स्तन बेक गर्न: यो कुखुराको स्तनको आकारमा २२ र २ minutes मिनेटको बीचमा लिन्छ।
तिमी सक्छौ 350 chicken F मा कुखुराको छाती पकाउनुहोस् २-30--30० मिनेट नजिकको लागि (यद्यपि म माथिल्लो तातो मन पर्छ)।
कुखुराको स्तन १ 165 ° F को आन्तरिक तापमानमा पुग्नुपर्दछ (म यसलाई १ 160०-१-162 ° F को आसपास हटाउँछु र यसलाई प्यानमा आराम गर्दा १ 16 to सम्म चढ्न दिन्छु)। यदि कुखुराको स्तनहरू मोटाईमा भिन्न हुन्छन्,aप्रयोग गरेर मासु कोमलता तिनीहरूलाई एक मोटाईमा पाउन्ड गर्नु यो उत्तम तरिका हो कि तिनीहरू सबैले समान रूपमा पकाउँछन्।
सुझाव: यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो मासुलाई काटने अघि यसलाई आराम गर्नुहोला किनकि यसले तपाईंको सम्पूर्ण कुण्डोको छालालाई अतिरिक्त चिसो राख्दै कुकुरमा सबै रस पुनःबर्साब गर्न अनुमति दिन्छ!
बदाम बटर च्यू कसरी बनाउने
कुखुराको स्तनहरू गर्न सक्छन् आकार in oz 10 oz मा फरक हुन्छ यसको मतलब कुकको समय फरक हुन सक्छ! यस नुस्खामा, म औसत आकारको हड्डी रहित स्तनहरू (लगभग oz ओज वा सो भन्दा बढी) प्रयोग गर्दछु।
सफलता सुनिश्चित गर्ने सब भन्दा उत्तम तरिका भनेको मासु थर्मामिटर प्रयोग गर्नु हो। तपाईं एकदम रसदार कुखुरा पाउनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न यो एक धेरै सस्तो तरीका हो (तपाईं तिनीहरूलाई $ १० भन्दा कम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ)।
कसरी मौसम चिकन स्तनहरु
चिकन स्तनहरू हल्का स्वादका रूपमा हुन्छ ताकि तपाईं मौसममा र केही नुन थप्न चाहानुहुन्छ। धेरै जसो म brine वा प्रयोग गर्दैन कुखुरा मरीनाडे जस्तो कि म प्राय: द्रुत खाना खोज्दैछु तर पक्कै पनि तपाई त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि पकाइएको छ र राम्रोसँग अनुभवी छ भने, तिनीहरू आफैंमा कोमल र रसदार छन्।
वास्तवमै केहि पनि जान्छ तर कुखुरा स्तनहरूका लागि मेरा मनपर्ने मौंसाहरू यहाँ छन्:
इटालियन मसाला, नुन र पेपरिका (तल प्रति नुस्खा)
नुन, कालो मिर्च, जैतुनको तेल र ताजा जडीबुटीहरू निम्बूको उत्साहको साथ
पसलमा खरीद गरिएको कुखुरा वा स्टेक मौसममा वा रब्स
कसरी चिकन स्तन बेक गर्ने
बेक्ड हड्डी रहित कुखुरा स्तनहरू बनाउनु एकदमै सरल छ, कुञ्जी खाना पकाउने समय र तापमानमा छ।
ओभनलाई degrees०० डिग्रीसम्म पुर्‍याउनुहोस्।
जैतूनको तेल, जडिबुटी र मसलाको साथ कुखुराको स्तन टस गर्नुहोस् (तल नुस्खा प्रति)।
हल्का हल्का तेल बनाउने डिश वा प्यान ताकि चिकनको स्तनहरू टाँसिदैन।
२२-२6 मिनेट वा १ 16 they ° एफ सम्म पुग्दासम्म कुखुराको स्तनहरू बनाउनुहोस्।
तिनीहरूलाई टुक्रा पार्नु भन्दा पहिले तिनीहरूलाई आराम गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई तान्नुहोस्।
यो सजिलो पकाइएको चिकन स्तन नुस्खाको एक साधारण मिश्रण छ इटालियन मसाला , पेपरिका, मसाला नुन र मरिच, तर तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ नुस्खामा आधारित मा तपाईं कुखुरा प्रयोग गरिरहनु भएको छ र के तपाईं हातमा छ।
रोजमेरी, ओरेगानो, र कागती जुस समेत सबैले यस नुस्खेमा ठूलो थप बनाउँदछ। घरेलु काजुन मसाला पनि एक ठूलो थप छ यदि तपाईं केहि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने काजुन कुखुरा पास्ता !
चिकन तयार गर्ने थप सजिलो तरीका
कसरी कुखुरा उमाल्ने - शोरबा + मासु बनाउँदछ!
पोच गरिएको चिकन कसरी बनाउने - 15 मिनेट!
ओभन फ्राइड चिकन
सजिलो ग्रील्ड चिकन स्तन - SO रसदार!
तत्काल भाँडो कुखुरा (प्रेशर कुकर)
कागती भुनी चिकन
तयारी समय3 मिनेट कुक समय२२ मिनेट आराम गर्ने समय। मिनेट कुल समय25 मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन पकाएको कुखुराको स्तनहरू एक सरल र स्वस्थ डिनर विकल्प हो जुन प्रोटिनले भरिएको हुन्छ!
▢6- कुखुराको स्तन हड्डीविहीन छाला
▢एक चम्मच इटालियन मसाला
▢½ चम्मच मसाला नुन
▢¼ चम्मच पेपरिका
▢¼ चम्मच काली मिर्च
He०० डिग्री सेल्सियस को लागी गरम गरम ओभन।
जैतूनको तेल र मसालामा कुखुराको स्तन टस गर्नुहोस्। कोटमा राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
हल्का सागिएको प्यानमा राख्नुहोस् र २२-२6 मिनेट वा बेक गर्नुहोस् जबसम्म तापमान १ 165 ° एफ मा पुग्दैन।
टुक्रा गर्नु अघि minutes मिनेट आराम गर्नुहोस्।
सानो कुखुराको स्तनहरू २२ मिनेटको करीब लिन्छन्, ठूला कुखुराको स्तनहरूले २ 26 मिनेट जति लिन सक्दछ। सबै भन्दा राम्रो नतीजाहरूको लागि, तत्काल पढ्ने थर्मामीटर प्रयोग गर्नुहोस्।
क्यालोरिज:२66,प्रोटिन:०g,मोटो:।g,पागलिएको बोसो:एकg,कोलेस्ट्रॉल:१२०मिलीग्राम,सोडियम:12१२मिलीग्राम,पोटासियम:6 6मिलीग्राम,भिटामिन ए:१००IU,भिटामिन सी:२.२मिलीग्राम,क्यालसियम:पन्ध्रमिलीग्राम,फलाम:०.मिलीग्राम
कीवर्डबेक भएको चिकनको स्तन, हड्डी रहित छालाविहीन कुखुराको स्तनहरू, ओभन बेक्ड चिकन कोर्समुख्य मार्ग पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।